eNasha.com - पुस्तकालयका लागि उत्तेजक साहित्य !
अष्ट्रियाको राजधानी भियनास्थित सिटी हलमा रहेको पुस्तकालयले आफ्नो सुविधा विस्तार गर्न एउटा यौन उत्तेजक कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
एपी समाचार संस्थाका अनुसार यो पुस्तकालयले 'सेक्स हटलाइन' नामक यो कार्यक्रम पुस्तकालयको क्षमतालाई बढाउन शुरु गरेको पुस्तकालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
वास्तवमा यो ज्यादै अनौठो र खासगरी अपाच्य कुरा हो कि जनताहरुले पुस्तकालयलाई सहयोग गर्न यौनप्रधान साहित्यलाई सुन्नु पर्नेछ । त्यसका लागि जनताले एउटा निश्चित नम्बरमा फोन गर्नेछन् र उनीहरुलाई मनपर्ने साहित्यको नम्बर कोड दाब्ने छन् । त्यो नम्बर कोड दाबेपछि उक्त नम्बरमा पर्ने १८ औँ, १९ औँ र २० शताब्दीमा लेखिएका कामुक साहित्य कसैले पढेर सुनाउने छन् ।
यसरी जनताले फोन गर्दा उनीहरुको प्रतिमिनेट ५३ सेन्ट खर्च हुनेछ । तर रोचक के छ भने उनीहरुले सुन्ने यौनउत्तेजक साहित्य चाहिँ कुनै अैरेगैरेको स्वरमा हुने छैन । देशकै चर्चित र सफल अभिनेत्री एनी बेनेटले ती सबै साहित्य पढेर सुनाउने छिन् ।
सिटी हलले गरेको यो कार्यमा सघाउनेको पनि राम्रै जमात छ । (यौनप्रधान सामग्री यो पनि मनपर्ने नायिकाको आवाजमा सुन्न पाउँदा ग्राहकहरु खुशी हुने नै भए नि, हैन त ?) एनीले चाहिँ यसअघि नै यस पुस्तकालयमा रहेका १ हजार २ सय पुस्तकका यौन उत्तेजक सामग्री पढेर आनन्द लिइसकेकी छिन् । अष्ट्रियालीहरुले एनीको मादक स्वरलाई निकै रुचाइरहेका होलान् !
सेक्स उपाय माया सुन्दरी भव्यता गुगल बलिउड सेलेब्रिटी मूर्ख्याइँ विज्ञापन इन्टरनेट मुद्दा मामिला श्रीमानश्रीमती नग्नता हलिउड फट्याइँ परिस्थिति प्रविधि उदारता कीर्तिमान